isiXhosa | Wordworks
Wamkelekile kulwazi lokufunda nokubhala ekhaya
(Ikhasi lezixhobo zesiXhosa)
Eli khasi liza kuhlaziywa ngokufakelwa izinto nemisebenzi emitsha rhoqo, ngoko ke nceda usoloko ulijonga.
Cofa kwiqhosha lokumamela ukuze umamele okushicilelweyo.
Wamkelekile ukuba wabelane ngeli phepha usebenzisa iindlela ezingezantsi.
Ukuzoba ngumsebenzi ofuna kusetyenziswe ingqondo
Ubusazi ukuba ukuzoba nokubhala kufuna umntu acinge kwaye acwangcise. Ngumsebenzi ofuna kusetyenziswe ingqondo kwaye uyabonwabisa kakhulu abantwana! Xa bezoba abantwana, batsho baqonde ukuba into yokwenyani efana nomama okanye utata wabo, inako ukwenziwa ibe ngumfanekiso osephepheni. Eli linyathelo elibalulekileyo kubantwana abancinci. Read More
Xa umntwana wakho eqala ukuzoba angasuka arhiphize njee ephepheni. Kubalulekile ke ukuba umkhuthaze futhi umxhase, ungayigxeki imizobo yakhe okanye uthi makakope eyakho imizobo. Bancedise abantwana ukuba bacinge ngento abafuna ukuyizoba uze ubanike ithuba lokuzama.
Khuthaza umntwana enze ngathi uyafunda
Lonke ixesha umntu efundela umntwana, uthi umntwana afunde ngakumbi ukuba kuthetha ukuthini na ukuba ngumntu ofundayo. Ukukhuthaza umntwana enze ngathi uyafunda kulinyathelo elibalulekileyo elimsondeza ekufundeni kokwenyani. Umntwana wakho akunyanzelekanga ukuba alinde de aye esikolweni Read More
ukuze aqalise ukufunda. Ncokola nosapho kunye nabahlobo bakho malunga nokuthengela umntwana wakho iincwadi. Ukuba izihlobo zakho zifuna ukumpha izipho ngeemini ezikhethekileyo nezibalulekileyo, zikhuthaze ukuba zikhethe isipho esiyincwadi. Ungakhangela iivenkile ezithengisa iincwadi esezikhe zasetyenziswa, ukhangele kuzo iincwadi. Ukuthengela umntwana wakho iincwadi kufana nokutyala imali kwikamva lakhe.
Lonke ixesha umntu efundela umntwana, uthi umntwana afunde ngakumbi ukuba kuthetha ukuthini na ukuba ngumntu ofundayo. Ukukhuthaza umntwana enze ngathi uyafunda kulinyathelo elibalulekileyo elimsondeza ekufundeni kokwenyani. Umntwana wakho akunyanzelekanga ukuba alinde de aye esikolweni ukuze aqalise ukufunda. Ncokola nosapho kunye nabahlobo bakho malunga nokuthengela umntwana wakho iincwadi. Ukuba izihlobo zakho zifuna ukumpha izipho ngeemini ezikhethekileyo nezibalulekileyo, zikhuthaze ukuba zikhethe isipho esiyincwadi. Ungakhangela iivenkile ezithengisa iincwadi esezikhe zasetyenziswa, ukhangele kuzo iincwadi. Ukuthengela umntwana wakho iincwadi kufana nokutyala imali kwikamva lakhe.
Ndiyawuthanda umzimba wam
Namhlanje umntwana wakho uza kuziqhelanisa nokubiza amagama amalungu omzimba. Ncokola naye umbuze ukuba ngawaphi amalungu omzimba wakhe anokuwabiza. Ukuba ikhona ingoma ethetha ngamalungu omzimba futhi enentshukumo, ningayicula kunye nomntwana wakho. Umntwana wakho usenokukufundisa Read More
eyakhe ingoma okanye isicengcelezo asifunde esikolweni, asifunde kubahlobo bakhe okanye kwinkqubo kamabonakude ayithandayo.
Nika umntwana wakho isiqwengana sephepha kunye neekhrayoni ezinemibala, azobe. Mkhuthaze ukuba azobe umfanekiso womzimba wakhe. Ungamnika nezinto ezifana neqokobhe lephepha langasese, iibhokisi, iibhokisi zamaqanda, njalonjalo. Angazidibanisa ngeglu ezi zinto, enze ngazo umzimba womntu. Ukuba umntwana wakho ufuna ukuba ubhale amagama amalungu omzimba kumfanekiso wakhe okanye kumzimba womntu awubumbileyo, mncede umbhalele.
Ukwazi amagama amalungu omzimba wakhe, kuyamnceda umntwana wakho kutsho kukhule ulwazi lwakhe malunga nelizwe ahleli kulo kwaye okubaluleke ngakumbi, kukhulisa isigama somntwana. Konke ke oku kwenza kube lula emntwaneni ukufunda kunye nokubhala.
Namhlanje umntwana wakho uza kuziqhelanisa nokubiza amagama amalungu omzimba. Ncokola naye umbuze ukuba ngawaphi amalungu omzimba wakhe anokuwabiza. Ukuba ikhona ingoma ethetha ngamalungu omzimba futhi enentshukumo, ningayicula kunye nomntwana wakho. Umntwana wakho usenokukufundisa eyakhe ingoma okanye isicengcelezo asifunde esikolweni, asifunde kubahlobo bakhe okanye kwinkqubo kamabonakude ayithandayo.
Fakani imisebenzi eza kwenziwa kwikhalenda
Ukufaka imisebenzi kwikhalenda ngumsebenzi oluncedo kakhulu xa usenziwa ngabantwana kuba batsho babone izinto abaza kuzenza ngosuku ngalunye lweveki okanye basenokujonga iintsuku ezidlulileyo kwikhalenda yabo babone izinto esele bezenzile kusuku ngalunye.
Ukwazisa umntwana wakho ikhalenda nendlela Read More
yokuyisebenzisa kuyamncedisa ukuba afumane ulwazi ngezinto ekufuneka ezenzile ngeveki ekunye nosapho lwakhe. Oku kungabanceda abantwana bazive bekhuselekile kuba besazi ukuba balindele ntoni. Ukusebenzisa ikhalenda kuphinda kuncedise umntwana azi ukuba ukubhala kuluncedo futhi kuneenjongo.
Xa usenza ikhalenda, yahlulahlula iphepha elingabhalwanga elinguA4 libe ngamacandelo asixhenxe – icandelo ngalinye limele usuku lweveki. Ncedisa umntwana wakho afunde iintsuku zeveki nize nincokole ngezinto ezenzekayo ngosuku ngalunye lweveki. Ungamchazela ngeentsuku ekuyiwa ngazo esikolweni nezo zempelaveki.
Mcele ke ngoku umntwana wakho ukuba abhale okanye azobe umfanekiso weyona nto onwabela ukuyenza ngosuku ngalunye. Emva kokuzoba ungamncedisa ngokuthi ubhale phantsi into ayithethayo ngomfanekiso wakhe. Xa iintsuku ezimbalwa zekhalenda sele zigcwalisiwe, ningancokola ngeentsuku asele ezigcwalisile umntwana wakho.
Ukwazisa umntwana wakho ikhalenda nendlela yokuyisebenzisa kuyamncedisa ukuba afumane ulwazi ngezinto ekufuneka ezenzile ngeveki ekunye nosapho lwakhe. Oku kungabanceda abantwana bazive bekhuselekile kuba besazi ukuba balindele ntoni. Ukusebenzisa ikhalenda kuphinda kuncedise umntwana azi ukuba ukubhala kuluncedo futhi kuneenjongo.
Dlalani u “Ndize” ngoonotsheluza
Abantwana bayakuthanda ukudlala u “Ndize”. Namhlanje ke baza kukhangela izandi okanye amagama oza kuwazimelisa.
Sebenzisa amaphepha okanye iikhadibhodi ezindala zesiriyeli wenze oonotsheluza abathandathu (basenokuba ngaphezulu kweli nani, kuxhomekeke kubudala bomntwana wakho). Bhala izandi okanye amagama awaqhelileyo umntwana wakho koonotsheluza. Zimelisa Read More
oonotsheluza apho endlwini uze uxelele umntwana wakho ukuba bangaphi oonotsheluza ekufuneka ebakhangele. Mcele ukuba ajikeleze akhangele oonotsheluza abazinyeliswe apho endlwini. Jikeleza nomntwana wakho kuwo onke amagumbi uzame ukumnika izikhokelo malunga nendawo ezifihlwe kuyo izandi okanye amagama. Unokuthi kuye: “Uyatshisa” xa ekufutshane nendawo enonotsheluza okanye usenokuthi “Uyabanda” xa ekwindawo engenaye unotsheluza. Xa emfumene unotsheluza umntwana, mcele afunde isandi okanye igama elibhaliweyo. Ukuba usebenzise izandi kuphela, mncedise umntwana wakho acinge ngegama eligxile kwisandi esikunotsheluza. Kanti ke ukuba usebenzisa amagama, ncedisa umntwana wakho akhe isivakalisi esinegama elikunotsheluza. Ukuba nifuna ukuqhuba ngokuzonwabisa nomntwana wakho, ungamcela ibe nguye oza kuzimelisa oonotsheluza uze wena ubakhangele. Uyakuyivuyela kakhulu loo nto yokuba khe ibe nguye ofihla amagama.
Lo mdlalo unika umntwana wakho ithuba lokuzonwabisa kunye nawe ngelixa eziqhelanisa namagama okanye izandi azifundayo.
Amagama: umama, utata, wam, ewe, yiza, hayi, yam, dlala, into, ncinci, ntoni, nkulu, jonga, biza.
Sebenzisa amaphepha okanye iikhadibhodi ezindala zesiriyeli wenze oonotsheluza abathandathu (basenokuba ngaphezulu kweli nani, kuxhomekeke kubudala bomntwana wakho). Bhala izandi okanye amagama awaqhelileyo umntwana wakho koonotsheluza. Zimelisa oonotsheluza apho endlwini uze uxelele umntwana wakho ukuba bangaphi oonotsheluza ekufuneka ebakhangele. Mcele ukuba ajikeleze akhangele oonotsheluza abazinyeliswe apho endlwini. Jikeleza nomntwana wakho kuwo onke amagumbi uzame ukumnika izikhokelo malunga nendawo ezifihlwe kuyo izandi okanye amagama. Unokuthi kuye: “Uyatshisa” xa ekufutshane nendawo enonotsheluza okanye usenokuthi “Uyabanda” xa ekwindawo engenaye unotsheluza. Xa emfumene unotsheluza umntwana, mcele afunde isandi okanye igama elibhaliweyo. Ukuba usebenzise izandi kuphela, mncedise umntwana wakho acinge ngegama eligxile kwisandi esikunotsheluza. Kanti ke ukuba usebenzisa amagama, ncedisa umntwana wakho akhe isivakalisi esinegama elikunotsheluza. Ukuba nifuna ukuqhuba ngokuzonwabisa nomntwana wakho, ungamcela ibe nguye oza kuzimelisa oonotsheluza uze wena ubakhangele. Uyakuyivuyela kakhulu loo nto yokuba khe ibe nguye ofihla amagama.
Amagama: umama, utata, wam, ewe, yiza, hayi, yam, dlala, into, ncinci, ntoni, nkulu, jonga, biza
Khanike nizingele iipatheni
Ubusazi? Kubalulekile kakhulu ukuba umntwana wakho azibone iipatheni xa esaqala ukufunda. Xa abantwana besebenza ngamanani, ziba khona iipatheni kanti ke naxa beqalisa ukufunda badibana neepatheni ezenziwa ngoonobumba kunye nezandi. Umzekelo: thula, vula, sula, fula, cula. Onke lamagama anepatheni yoonobumba engu – ula. Read More
Njengokuba nihleli, nijikelezwe ziipatheni ezingaphakathi endlwini kunye nezo zingaphandle. Ncokola kunye nomntwana wakho umchazele ukuba yintoni ipatheni. Ipatheni ayingomfanekiso nje ozimeleyo koko ipatheni kuxa imifanekiso okanye iimilo ezithile ziphindaphindwe ngendlela ethile. Hambahambani nijikeleze kunye nomntwana wakho apho ekhaya nizingele iipatheni kumagumbi okulala. Khangelani iipatheni ezahlukileyo. Ningazifumana iipatheni kwikhethini ezisezifestileni, kwiingubo, kumaphepha okusongela izipho okanye kwizinto ezipakishwe kakuhle ekhitshini. Jongani ipatheni ibe nye, ncokolani ngezinto enizibonayo kuyo nize nichaze ukuba kutheni nisithi yipatheni nje. Umntwana wakho angahambisa umnwe wakhe phezu kwepatheni.
Ingaba le patheni ihamba ngokuthe ngqo, iyajikeleza, iyenyuka okanye iyehla? Ingaba inamajikojiko okanye inamachokoza okanye ingaba yiyiphi imibala esetyenzisiweyo?
Nika umntwana wakho iphepha kunye nento aza kuzoba ngayo. Angakopela iipatheni azifumene endlwini ephepheni. Usenokuzoba aze ahombise iipatheni azenze ngokwakhe. Ukuba oku kuyamnzimela umntwana wakho, ungamqalela umzobo wepatheni elula uze ke emva koko umncedise ayikope futhi ayigqibezele.
Khuthaza abantwana babuze imibuzo, uyiphendule
Abantwana basoloko befuna ukwazi isizathu sokwenzeka kwezinto kwaye ke asisoloko sinazo iimpendulo. Kodwa ke kufuneka sibakhuthaze ukuba bayibuze imibuzo. Abantwana baziphatha ngendlela encomekayo xa siyiphendula imibuzo yabo futhi batsho bazi ukuba kutheni kufuneka kwenziwe izinto ezithile. Read More
Xa abantwana bebuza imibuzo batsho bafunde ulwimi ekufuneka lusetyenzisiwe xa umntu ebuza imibuzo. Bafunda indlela yokubuza umbuzo ngokuchubekileyo ze bafunde nokuba abantu abadala abahleli kunye nabo babakhathalele kwaye izinto zobomi ezahlukileyo bayazazi. Bafunda nezinye izinto ezimalunga nelizwe abahleli kulo. Kunzima kakhulu ukwazi ukuba umntwana wakho ucinga ntoni kodwa xa ebuza umbuzo utsho wazi ukuba yintoni anomdla kuyo futhi ube namanakani ento ayicingayo. Amaxesha amaninzi, abantwana bakhe babuze imibuzo kuwe ube ungenazimpendulo zayo. Akufunekanga ke ucinge ukuba kufuneka wazi yonke into. Basenokuzifundela kwalapho kuwe, indlela yokufumana iimpendulo zemibuzo. Ungazama ukubuza eminye imibuzo, ungayikhangela ke nakwi – intanethi (nangona nayo isenokukulahlekisa). Kuba kuhle kakhulu ke xa abantwana befumanisa ukuba nabantu abadala basafunda kwaye futhi nabo bayazama ukuzikhangela iimpendulo zemibuzo. Kuphinda kube kuhle kwakhona xa beqonda abantwana ukuba ikho imibuzo enzima kwaye asinazimpendulo zayo. Kubalulekile ukuba abantwana bazive bakhuselekile xa bebuza imibuzo benika neempendulo – nokuba iimpendulo zabo azichanekanga. Khumbula kaloku, iimpazamo kunye neempendulo ezingachanekanga yindlela yokufunda kunye.
Ezinye izikolo zilungiselela ukuvula kwakhona. Abantwana bakho basenokuba nemibuzo emininzi emalunga nokunxitywa kwesifonyo okanye imaskhi, ukuhlanjwa kwezandla, ukuya esikolweni kunye nokhuseleko lwabo. Ncokola ke nomntwana wakho malunga nokuthethwe esikolweni sakhe umbuze ukuba ingaba akanamibuzo na. Mbuze ukuba ucinga ukuba kutheni le nto kufuneka sinxibe izifonyo okanye iimaskhi futhi sihlambe izandla rhoqo. Ukubuza nokuphendula imibuzo yenye yeendlela afunda ngazo umntwana.
Zonwabiseni ngomdlalo wokubeka izinto ezizakuba yimiqobo
Abantwana bayakuthanda ukungena ngaphakathi ezintweni, ukukhwela nokujikeleza izinto kumdlalo wokubeka izinto ezizakuba yimiqobo. Nakanjani, abantwana baza kuwonwabela ngakumbi ke lo mdlalo xa wena uwudlala kunye nabo! Read More
Kulo msebenzi wanamhlanje wena nomntwana wakho niza kuzonwabisa ngokudlala umdlalo wokubeka izinto eziza kuba yimiqobo xa nidlala. Lo mdlalo uza kumnceda umntwana wakho ngendlela emnandi neyonwabisayo yokuphulaphula nokulandela imiyalelo, ukufunda amagama achaza intshukumo nalawo achaza apho ikhoyo into. Abantwana baza kufumana nethuba lokushukumisa imizimba yabo. Lo mdlalo ke uza konwabisa futhi uvelise neengxaki ekufuneka zisonjululwe ngabantwana.
Ukuba unayo indawo phaya phandle ngasegadini yakho, ungasebenzisa imithi ukuba ikhona, ifenitshala, umgxunya onesanti okanye nayiphina into yokudlala eninayo ekhaya wenze imiqobo. Usenokusebenzisa nezinto ezifana nezi: izitulo, itafile, ileli, imethi, intambo yokudlala ugqaphu, ibhola nezinye izinto. Xa lo mdlalo uza kudlalelwa phakathi endlwini ungakwazi ukusebenzisa ifenitshala esendlini. Uze ungalibali ke, eyona nto ibalulekileyo lukhuseleko lomntwana wakho xa nidlala. Qinisekisa ukuba izinto oza kuzibeka zibe yimiqobo azizuba nabungozi emntwaneni wakho.
Nakugqiba ukubeka izinto eziza kuba yimiqobo kunye nomntwana wakho, mnike imiyalelo aza kuyilandela xa nidlala lo mdlalo. Sebenzisa amagama amaninzi kangoko unako, achaza intshukumo. Umzekelo unokuthi: tshebeleza phantsi kwemethi, tsiba esitulweni, gaqa phantsi kwetafile, xhumaxhuma uyokubamba ucango. Ukuba umntwana wakho uyafuna ukusikelwa ixesha, ungamchazela ukuba makathathe ixesha elingakanani na ukudlala umdlalo olula. Emva koko ke nika umntwana wakho ithuba lokuba khe ibe nguye oza kukunika imiyalelo, uze ke wena uyilandele. Lo mdlalo ningawuphindaphinda kangangoko nifuna ngokumana nitshintsha imiyalelo.
Masidlale umdlalo wokulinganisa izinto ezithile
Kuyabonwabisa abantwana ukudlala umdlalo wokulinganisa izinto ezithile kwaye bafumana ithuba lokusebenzisa ulwimi ngeendlela ezahlukeneyo xa besebenzisa ulwimi lwabo lwemihla ngemihla. Kwakhona bafunda ukucwangcisa futhi bafunde nokuyila. Read More
Abantwana bayakuthanda ukulinganisa amabali abathe bawaphulaphula kanti ke ngamanye amaxesha bathanda ukulinganisa izinto ezithile ezifana nokudlala ivenkile, ukudlala isikolo okanye balinganise imisebenzi eyenziwa ngamalungu osapho ekhaya okanye emisebenzini. Cinga ngeminye imidlalo yokulinganisa izinto ezithile, enokonwatyelwa ngumntwana wakho okanye usenobuza kuye malunga nemidlalo ayicingayo. Usenokucinga ngokudlala umdlalo wokusebenza erestyu abe ngumntu ozisela abantu ukutya, ukudlala umdlalo wokuba ngumqhubi webhasi okanye weteksi, umdlalo wokuthengisa iimpahla okanye umdlalo wokuba ngutitshala. Ninomntwana wakho nisenokukhetha ukulinganisa ibali.
Ukuba nikhethe ibali, ncokolani ngebali nize niqokelele izinto eniza kuzisebenzisa xa nilinganisa ibali. Umntwana wakho usenokufuna ukusebenzisa iimpahla ezindala kunye nezinto ezilapho endlini ezifana nengubo abazokwenza ngayo indlu, ibhrashi abaza kwenza ngayo ifoni okanye ibhokisi endala abaza kwenza ngayo isitovu. Ukuba ufuna ube mnandi futhi wonwabise lo mdlalo, ungacela amanye amalungu osapho ukuba nawo athathe inxaxheba kulo mdlalo.
Yonwabela ukuncokola kamnandi nomntwana wakho
Xa kuncokolwa nabantwana futhi benikwa ithuba lokuthetha, isakhono sabo solwimi sikhula ngakumbi. Abantwana abanesakhono esilungileyo sokuthetha bakufumana kulula ukufunda ukubhala kakunye nokufunda. Yonke imihla aba maninzi kakhulu amathuba okuthetha nokuphulaphula umntwana wakho. Read More
Xa edlala umntwana wakho unokuncokola naye wenjenje:
Isebenza njani loo nto?
Uyenze njani le nto?
Ziphulaphule ke ngenyameko iimpendulo zabo uze ubakhuthaze ukuba bakunike iinkcukacha kunye nenkcazelo ecacileyo.
Ziqhelanise namagama ngendlela emnandi neyonwabisayo
Xa abantwana befunda okanye bebhala badibana namagama amaninzi kakhulu. Amagama amaninzi akubi lula ke ukuwabiza kwaye kufuneka ukuba umntwana wakho awafunde aphinde awabhale rhoqo la magama, phambi kokuba akwazi ukuwanakana nokuwapela ngokuzithemba. Read More
Nika umntwana wakho ithuba lokuziqhelanisa nala magama ngendlela emnandi neyonwabisayo. Bangawabhala ngomnwe okanye babhale ngoluthi esantini, bangasebenzisa ibhrashi yokupeyinta kunye namanzi babhale phantsi phaya phandle, basenokubumba amagama ngentlama yokudlala kungenjalo babhale ngetshokhwe ebhodini okanye babhale phaya phandle.
Khetha igama libe linye kuluhlu lwamagama esininike lona. Biza igama, umntwana amamele. Mcele ukuba alibize naye ze alisebenzise igama kwisivakalisi. Phinda ulibize kwakhona igama ze umntwana azame ukuziqhelanisa nokulibhala igama elo ngeendlela ezimnandi nezonwabisayo ezichazwe apha ngasentla. Xa ubona ukuba umntwana ufumana ubunzima kulo msebenzi, mncedise ungamyeki asokole. Qhuba ke umnike igama elilandelayo.
Ukuziqhelanisa nala magama kuya kumnceda umntwana wakho akwazi ukufunda ngokukhawuleza futhi ayiqonde ngcono into ayifundayo. Uza kuncedakala futhi naxa sele eqalisa ukubhala ezakhe izivakalisi.
Mangaphi amagama onokuwacinga?
Ubusazi ukuba abantwana bakufumana kulula ukufunda ukubhala kunye nokufunda xa besazi ukuba amagama esiwasebenzisa xa sithetha akhiwa ngezandi ezahlukileyo? Imidlalo yokuphulaphula incedisana nabantwana ukuba bamamele izandi ezikumagama asetyenziswa xa kuthethwa. Read More
Dlala lo mdlalo wokuphulaphula kunye nomntwana wakho. Nikanani amathuba okukhetha isandi ekugxilwe kuso nize nibone ukuba mangaphi amagama eninokuwacinga agxile kweso sandi. Umzekelo, ningakhetha amagama amantombazana agxile kunobumba u /c/. Sebenzani kunye ke nicinge ngamagama amantombazana anesandi u /c/, umzekelo, Coceka, Cikoza, Celiwe, Cingiwe, Nomcoseleli. Uze ukhumbule ke ukuba la wona amagama alandelayo awagxilanga kwisandi u /c/ koko agxile ku /ch/: Umzekelo, Chulumanco, Nomachule, Nomachiza. Use nokucinga ke nangamagama ezinto zasendlini agxile kwisandi esithile.
Xa nidlala lo mdlalo ningazisikela ixesha okanye nisenokuqhuba nidlale de niphelelwe ngamagama agxile kwisandi enisikhethileyo!
UYenzani incwadi encinci yebali
Amabali ayindlela elungileyo yokwengeza amagama amatsha kunye neengcinga ezintsha kulwimi lomntwana wakho. kuphulaphula amabali kuyamnceda umntwana wakho kuba kukhulisa isakhono sokuphulaphula ngenyameko nokuzikisa ingqondo. Xa nisenza incwadi encinci emalunga nebali, loo nto ibonisa abantwana ukuba into ethethwayo nephulaphulwayo inako ukubhalwa ibe nentsingiselo kwaye bangayonwabela amaxesha amaninzi. Read More
Khangela indawo ethe cwaka apho ekhaya, neniza kuhlala kuyo kakuhle uze ubalisele umntwana wakho ibali. Isenokuba libali enilaziyo nomntwana wakho okanye isenokuba libali angazange waliva umntwana wakho. Wakugqiba ukulibalisa, ncokolani ngeyona ndawo ayithande kakhulu ebalini. Mcele akubalisele ngezinto azikhumbulayo ezenzeke xa liqala ibali nezo zenzeke xa liphela ibali.
Songa iphepha elingu-A4 libe yincwadi encinci. Nika umntwana wakho ithuba lokuzama ukubhala isivakalisi kwiphepha ngalinye lencwadi encinci. Usenokuzibhala ngokwakho izivakalisi ngelixa umntwana ebalisa okanye umncedise ngokubhala amalungu athile amagama. Mnike ithuba lokuzoba umfanekiso ohambelana nesivakalisi ngasinye.
Umntwana wakho akasoze adikwe kukuphulaphula xa umbalisela okanye umfundela ibali. Into eza kwenzeka, uza kubona ngaye sele ekubalisela wena elakhe ibali!
Yeka ipapethi eyenziwe ngekawusi ibalise ibali
Ukulinganisa ibali ngepapethi eyenziwe ngekawusi kungakhangeleka ngathi ngumdlalo njee kodwa kufuneka ukhumbule ukuba umdlalo ngamnye unika umntwana ithuba lokufunda. Lo msebenzi ufundisa abantwana ukuba baphulaphule ibali, baphinde balibalise ibali belandelelanisa kakuhle iziganeko zebali ze emva koko bengeze nemifanekiso ntelekelelo yabo ebalini. Umntwana wakho angaziva ekhululekile xa ethetha engumlinganiswa oyipapethi yekawusi. Read More
Qala wenze ipapethi ibe nye okanye zibe ninzi ngeekawusi kunye nomntwana wakho. Kufuneka ube nezi zinto zilandelayo: iikawusi, amaqhosha okanye iziciko zeebhotile oza kwenza ngazo amehlo, iziqwengana zamalaphu, iiribhoni, inaliti nerhali, iglu nayo nayiphi na into onokuhombisa ngayo ipapethi yakho.
Xa iipapethi sele zilungele umdlalo, khetha ibali elaziwa ngumntwana wakho okanye usenokubalisa elakho. Nikunye nomntwana wakho, sebenzisani iipapethi nibalise okanye nilinganise ibali. Nize nikhumbule ukulitshintshatshintsha ilizwi xa kuthetha umlinganiswa ngamnye. Nize nibonise nendlela ekhangeleka ngayo ipapethi yenu xa yonwabile, xa ikhathazekile okanye xa isozela.
Kaloku abantwana bayakuthanda kakhulu ukusebenzisa imifanekiso ntelekelelo yabo. Zonwabise ke nomntwana wakho ngokuthi nilinganise indawo ethile yebali.
Qaphela into ibe nye entsha akwaziyo ukuyenza umntwana wakho
Khawukhe ucinge ngabantwana kunye nezinto obafundise zona kule veki – izinto obafundisa zona yonke imihla ezifana nokuzinxibisa, ukupakisha iibhegi zabo nendlela yokubulisa abantu abadala. Ingaba bakuncedisile xa upheka kule veki, bametile okanye babala amaqanda ngethuba uwakhupha efrijini. Ingaba bayilungisile itafile phambi kwesidlo? Bazibalile iimela, iifolokhwe kunye namacephe? Niyibekile kakuhle kunye impahla eyomileyo esanda kuvaswa? Read More
Kaloku abantwana bayafunda kuthi lonke ixesha. Kwimisebenzi esiyenza rhoqo, bafunda izibalo, ulwimi kunye nezakhono zobomi. Xa niphinda nisebenza kunye, cinga ngezinto esele ezazi umntwana wakho. Phinda ucinge ngento ibe nye entsha akwaziyo ukuyenza, nofuna ukumxelela ngayo namhlanje.
Culani kunye ingoma
Abantwana bayazithanda iingoma ezinesingqi nezibenza bashukumise imizimba. Kaloku ezi ngoma zibakhuthaza ukuba bashukumise imizimba yabo futhi zikhulisa nesakhono sabo sokukhumbula. Ukuphindaphinda okukwezi ngoma nakwizicengcelezo kuncedisa umntwana ukuba afunde amagama amatsha futhi akwazi ukunxulumanisa amagama kunye nezijekulo ezifanelekileyo. Read More
Culani ingoma esininike yona ze nishukumise imizimba kunye nomntwana wakho. Yiculeni niyiphindaphinde khonukuze nizokwazi amagama asetyenziswe kule ngoma kwakunye nezijekulo ezihambelana nawo. Ungam- rekhodisha umtwana wakho xa eyicula esenza nezijekulo uze uthumelele amalungu osapho okanye izihlobo!
Ziziphi ezinye iingoma okanye izicengcelezo enizaziyo nomntwana wakho? Umntwana wakho angafuna ukwenza izijekulo ezahlukileyo kwezo zakho xa nicula okanye nicengceleza. Mcele ke ngoku ukuba azobe eyona ndawo ayithandileyo kwisicengcelezo okanye kwingoma. Nikonwabele ke ukucula nokucengceleza, ninomntwana wakho!
Ingaba ibukhali kangakanani impumlo yakho?
Lo msebenzi umnandi kwaye uza kumonwabisa umntwana wakho xa ekhangela izinto aza kuzinukisa. Unika umntwana wakho ithuba lokufunda nokusebenzisa amagama amatsha achazayo. Umntwana uphinda afumane nethuba lokuthatha izigqibo malunga nezinto azithandayo nezo angazithandiyo.Read More
Xa ukhangela izimvo zomntwana wakho, ubonisa ukuba uyayihlonipha into ayicingayo. Jikelezani ngaphakathi endlwini niphinde nijekeleze phandle niphethe iphepha nento yokuzoba. Cela umntwana wakho ukuba akhangele izinto ezinevumba. Ncokola kunye nomntwana wakho usebenzise amagama amaninizi ahlukileyo, uchaze ivumba lento nganye. Uyakufumanisa ukuba iziko okanye indawo yokubasela inuka umsi, intlama yokuxukuxa inuka i-mint, isepha inuka kamnandi kwaye ivumba layo licocekile, izihlangu zinuka kakubi, intlanzi engaphekwanga inuka okolwandle, isiqholo somzimba sinuka kamnandi okweentyatyambo. Umntwana wakho usenokusebenzisa amagama afana nala: inuka kakuhle, ndiyayibawela, iyoyikeka – okanye basenokuvela nawabo amagama. Bakhuthaze xa bebiza awabo amagama uze ubachazele ukuba wena ucinga ukuba izinto zinuka kanjani.
Zoba umfanekiso wento nganye uze ubhale igama layo. Umntwana wakho angazoba ubuso obonwabileyo okanye obukhathazekileyo ecaleni komfanekiso ngamnye ebonisa ukuba ingaba ulithandile na okanye akalithandanga ivumba lento.
Masenze isonka esihlohlwe izinto ezimnandi
Kumnandi kakhulu ukwenza isonka esihlohliweyo, kwaye esi sonka singalungela ixesha lesidlo sasemini okanye xa uziva ufuna nje ukuhlafuna.Umntwana wakho ufumana ithuba lokufunda isigama esitsha, ukulandela imiyalelo, ukufunda izakhono ezilula zobomi, nokonwaba kunye nawe! Read More
Izinto eziza kufuneka zezi: isonka, imela kunye naziphi na izinto zokuqaba nonokuzifaka esonkeni onazo ekhaya.
Ncokola nomntwana wakho ngeyona nto athanda ukuyifaka esonkeni. Myeke umntwana asebenzise umfanekiso-ntelekelelo aze achaze nayiphina into enokufakwa esonkeni. Jonga efrijini nasekhabhathini ukuba yintoni onayo emnandi, eninokuyifaka esonkeni. Mcele umntwana abize izithako njengokuba uziqokelela. Yenzani isonka esihlohliweyo ke ngoku kunye. Qinisekisa ukuba umntwana wakho uthatha inxaxheba kulo msebenzi. Ncokolani ngento eniyenzayo njengokuba niqhuba. Umzekelo, “Masigreyithe itshizi ukuze sikwazi ukuyifaka kwizonka ezininzi okanye yikha ngemela ibhotolo ibe ncinci ngexesha.” Mbuze umntwana ukuba yintoni elandelayo ekufuneka yenziwe.
Xa isonka silungile, sisike nisitye kunye futhi nincokole ngendlela esinambitheka ngayo.
Nika umntwana wakho ithuba lokuzoba okanye ukubhala izithako ezisetyenzisiweyo aze afote isonka sakhe esihlohliweyo okanye afote omnye wabo xa esitya esi sonka!
Le foto angayithumela ngo-whattsapp kwilungu losapho okanye umhlobo angakhange ambone ixesha elide.
Zonwabiseni ngemibuzo kunye neempendulo
Wawukhe wacinga ngento enokufundwa ngumntwana wakho kwiphepha elibonisa izinto ezithengiswayo? Abantwana bangafunda amagama ezinto, awemveliso, apho zivela khona nokuba zisetyenziswa njani. Bangabona futhi banakane izandi agxile kuzo amagama ezi mveliso baze bafunde izakhono zeziBalo ezifana nokubala izinto nokubona imibala. Read More
Xa uza kwenza lo msebenzi, kufuneka ube nephepha elibhengeza izinto ezithengiswayo onokulifumana kwiphephandaba okanye evenkileni. Nantsi imibuzo eyonwabisayo onokuyibuza emntwaneni wakho. Khangelani kunye, nomntwana wakho iimpendulo, kaloku ayilovavanyo olu, ngoko umntwana wakho akufunekanga azive enoxinzelelo. Ungabuza imibuzo efana nale:
Biza into ibe nye ekweli phepha esiyifumana enkomeni.
Biza into ibe nye enesandi u ‘b’. Faka kwisangqa into enombala o-orenji ekweli phepha. Bala zonke izinto ezinetyuwa ezikweli phepha uze uzibize ngamagama. Khangela kweli phepha izinto ezingqukuva zibe mbini. Biza into ibe nye ekufuneka iphekwe phambi kokuba ityiwe. Khangela izinto zibe ne onokuthanda ukuba nazo xa uzokwenza itheko. Khangela into eluhlaza nenempilo ekweli phepha. Biza into onokuyisela oyibonayo kweli phepha.
Ungazicingela eyakho imibuzo ke, futhi nomntwana wakho angakuvuyela ukukubuza imibuzo, kuleyo yakho!
Lo msebenzi ukhuthaza umntwana ukuba ayiphulaphule ngenyameko into oyithethayo. Kwakhona ukhulisa isakhono somntwana sokucinga nesolwimi.
Ncokola ngemifanekiso esebalini phambi kokuqalisa ukufunda
Ubusazi ukuba ukuncokola ngemifanekiso phambi kokufunda ibali kunganceda umntwana aliqonde ibali lingekafundwa nokufundwa? Imifanekiso inokusebenza njengesikhokelo xa kufundwa amagama amatsha. Iphinda incedise abantwana bakwazi ukunxulumanisa ibali nobomi kwakunye namava abo futhi iyabanceda bakwazi nokuqikelela into eza kwenzeka ebalini. Read More
Sininike imifanekiso ke esiyithathe kwincwadi yakwa Bookdash enesihloko esithi: “Ndiyakwazi ukuzinxibisa.” Ningancokola ke ngemifanekiso ekweli bali kunye nabantwana benu.
Nantsi imizekelo yemibuzo eninokuyibuza ngale mifanekiso: Ubona ntoni? Ucinga ukuba….? Uyalikhumbula ixesha….? Ubunokwenza ntoni wena xa….? Ucinga ukuba kuza kwenzeka ntoni?
Uze ukhumbule ke ukuba ukuthetha ngeembono zabantwana kuza kubanceda babe ngabafundi nababhali abangcono.
Ingaba injani imozulu?
Ukugcwalisa itshathi yemozulu yemihla ngemihla kunye nomntwana wakho kwenza ukuba umntwana akwazi okuqhubekayo kwindawo akuyo aphinde azi ukuba ixesha alimanga liyahamba. Oku kukhulisa isigama sakhe kuba utsho akwazi ukusebenzisa amagama afana nala: kukho ‘inkungu’, ‘kukho umoya ophephezelayo’, ‘kuyatshisa’, ‘kupholile’, ‘iqhaqhazelisa amazinyo’, ‘kubhudla umoya’, ‘kukho ilanga’, ‘linamafu’. Isakhono sabantwana sokucinga naso siyaphuhla njengoko bekhuthazwa ukuba banike ezabo izimvo ze bachaze izinto ezifanayo nezinto ezahlukileyo abazibonayo. Read More
Yahlula iphepha elingabhalwanga okanye ikhadi elenziwe ngebhokisi yesiriyeli libe ziibhloko ezisixhenxe ezilinganayo. Kufuneka ezi bhloko zibe nkulu ngokwaneleyo khonukuze umntwana wakho akwazi ukuzoba kuzo. Leyibhelisha ibhloko nganye ubhale usuku lweveki – uMvulo, uLwesibini, uLwesithathu, uLwesine, uLwesihlanu, uMgqibelo, iCawa. Qho kusasa, nikunye nomntwana wakho yiyani phandle okanye nikrobe imozulu efestileni. Ncokolani ngemozulu, umkhuthaze umntwana wakho ukuba asebenzise zonke izivamvo xa echaza imozulu. Ungambuza imibuzo efana nale: Ubona ntoni? Ucinga ukuba imozulu yanamhlanje inevumba? Uva ntoni? Le mozulu ikwenza uzive njani? Uza kunxiba ntoni namhlanje?
Mcele ke umntwana wakho ukuba azobe umfanekiso olula obonisa imozulu yosuku kwibhloko yolo suku. Ekupheleni kweveki, ninomntwana wakho, jongani itshathi yemozulu, nincokole ngezinto enizibonayo. Ungabuza imibuzo efana nale: Ziziphi iintsuku ebezinemozulu efanayo? Zingaphi iintsuku ebezinelanga? Umoya ubhudle ngeziphi iintsuku? Ibinjani imozulu ngoLwesithathu? Loluphi usuku oluthande kakhulu? Ngoba?
Ncokola nomntwana wakho ngezinto azithandayo. Ungambuza le mibuzo: Kukuphi okona kutya ukuthandayo? Yiyiphi eyona mibala uyithandayo? Sisiphi esona silwanyana usithandayo? Yiyiphi eyona midlalo uthanda ukuyidlala? Read More
Kusoloko kubalulekile kakhulu ke ukuchitha ixesha nabantwana khonukuze wazi izinto abazithandayo. Xa nihleli kunye, nawe ke mncokolele ngezinto ozithandayo nezikonwabisayo.
Yenza incwadi encinci. Imiyalelo yokuyenza incwadi encinci, iboniswe kwimifanekiso esikunike yona. Bhala kwiqweqwe layo langaphambili – “Izinto endizithandayo”.
Bhala isivakalisi esahlukileyo kwiphepha ngalinye uchaze izinto ebethe umntwana wakho uyazithanda. Izivakalisi zakho ungaziqala ngolu hlobo: “Owona mbala ndiwuthanda kakhulu ngo……….” Okanye “Ndithanda i……….” Ungalibali ke, kulungile kaloku ukuba abantwana bazame ukubhala. Xa becinga ngesandi nendlela yokusibhala, iba ngumsebenzi onzima kubo lo, nofuna ukuba bacinge kakhulu. Abantwana bangabhala nje isandi sokuqala uze wena uligqibezele igama. Bancome ke ngalo lonke ixesha bezama ukubhala!
Funda izivakalisi kunye nabo uze ubakhuthaze ukuba bazobe umfanekiso ohambelana nesivakalisi ngasinye. Ngoku ke unenye incwadi encinci eza kwengeza kwithala lakho leencwadi lasekhaya!
Masenze imisebenzi yosapho!
Ubusazi ukuba ukuncedisa kwimisebenzi yosapho kungamkhuthaza umntwana wakho azingce ngokuba yinxalenye yosapho? Ukuncedisa kubafundisa ukuzimela kunye nokuthatha uxanduva. Ukwenza uluhlu lwezinto eziza kwenziwa kuyamnceda umntwana wakho azi ukuba ukubhala kubalulekile kwaye kuneenjongo. Read More
Nikunye nomntwana wakho, yenzani uluhlu lwezinto zekhaya ezifuna ukwenziwa. Nazi iingcebiso: ukubeka kakuhle izinto zokudlala, ukufaka iimpahla ezimdaka kwibhaskithi, ukulungisa itafile xa kuza kutyiwa, ukupha izilwanyana-maqabane ukutya, ukwendlula ibhedi, ukucoca igumbi, ukuhlamba izitya, ukuhlakula igadi. Mcele umntwana ukuba azobe umfanekiso ohambelana nomsebenzi ngamnye. Bhala igama lomntu oza kwenza umsebenzi ecaleni komsebenzi ngamnye. Qinisekisa ukuba imisebenzi eza kwenziwa ngumntwana ibulungele ubudala bakhe kwaye ayinabungozi. Uluhlu malube nendawo aza kufaka kuyo uphawu umntwana okanye akrwele umgca phezu komsebenzi ogqityiweyo.
Yindlela emnandi neyonwabisayo ke le, yokuncedisana nomntwana wakho ukuba abe noxanduva futhi afake isandla kubomi bosapho!
Zoba kunye nomntwana wakho
Abantwana bayavuya xa bebona umntu omdala esenza kunye nabo umsebenzi. Xa uzoba kunye nomntwana wakhoqalani nincokole ngendlela eniza kuyizoba ngayo into eniyibonayo. Umntwana uphulaphula indlela ocinga ngayo kwaye loo nto iza kumbonisa naye indlela angacinga ngayo xa ezizobela. Read More
Kuza kufuneka iikhrayoni, iphepha okanye itshokhwe nendawo ethe tyaba eqinileyo phaya phandle okanye uluthi kunye nesanti oza kuzoba kuyo.
Bonisa umntwana wakho indlela oyizoba ngayo into oyibonayo. Umzekelo, usenokuthi, “Ndizoba laa festile iphaya. Ndibona iglasi yefestile emile okwexande (yizobe ke ngoku) phambi kwayo kukho iintsimbi ezihlayo (kumzobo wakho faka iintsimbi). Inomgubasi weplanga le festile (zoba umgubasi). Ikhethini zipinki ngoko ke ndiza kufaka umbala opinki. Iglasi inothuli oluncinci, mhlawumbi ndizofaka kancinci umbala ongwevu obonisa uthuli.
Khuthaza umntwana wakho ukuba azobe akubonayo. Qaphela ukuba umdla wontwana wakho ekuzobeni uthatha ithuba elingakanani. Ingaba liba lide kakhulu ixesha begxile kulo msebenzi? Ingaba mhlawumbi bayayitshintshatshintsha kakhulu imibala okanye bazoba iinkcukacha ezininzi? Baxelele ukuba yintoni oye wayiqwalasela, uze ubancome ngokuzama ukuzoba.
Nazi izinto ekufuneka unazo: izinto eniza kuzisebenzisa xa nilinganisa ibali (iipropu), umzekelo, iimpahla, ifenishala, izinto zokudlala, njl. Sikhethe ibali esilithathe kwa “Bookdash” elithi “UFudo ufumene ikhaya lakhe”. https://bookdash.org/books/tortoise-finds-his-home-by-maya-fowler-katrien-coetzer-and-damian-gibbs/ Read More
Khangela indawo eniza kuhlala kakuhle kuyo uze uhlale kuyo kunye nomntwana wakho. Xelela umntwana wakho isihloko sebali aza kuliphulaphula uze umbonise nomfanekiso. Mbuze ukuba ucinga ukuba ibali liza kuthetha ngantoni na. Akuba ephendule ke, phulaphulani ibali kunye. Emva kokuphulaphula ibali, mbuze umntwana wakho ukuba yiyiphi eyona ndawo ayithande kakhulu ebalini. Nawe ke mchazele ngendawo oyithande kakhulu ebalini. Ungambuza wenjenje, “Ingaba into elolu hlobo yayikhe yakwehlela wena? Waziva njani?” Khanijonge ke ngoku ukuba ingaba uqikelelo ebelenziwe ngumntwana ekuqaleni, lusondele na kwinto ibali ebelithetha ngayo.
Sebenzisani iipropu ke ngoku nilinganise kunye iindawo ezithile zebali. Ninga rekhodisha ngefoni xa nilinganisa ibali ze nithumelele umntu ekudala nimkhumbula….ingangumakhulu notatomkhulu okanye isihlobo! Le ingayindlela emangalisayo umntwana wakho anokunxibelelana ngayo nabantu ekudala engababoni.
Lo msebenzi ukunika ithuba lokuba ukhe uchithe ixesha kunye nomntwana wakho. Ukuphulaphula amabali kukhulisa isigama, ukukhumbula kunye nezakhono zokucinga ngokuyila. Ukulinganisa ibali kumnandi futhi kuyonwabisa kwaye yeyona ndlela yokunceda umntwana ukuba alikhumbule lula ibali.
Qashela igama lesilwanyana
Imidlalo yokuqashela incedisana nabantwana ukuba bakwazi ukucwangcisa iingcinga nezimvo zabo. Bafunda amagama nolwazi olutsha ngathi bayadlala futhi nangendlela eyonwabisayo. Xa beqalisa ukuqashela okanye ukubuza imibuzo abantwana, kubalulekile ukuba nomonde, ukubakhuthaza nokubancoma ngokuzama nokuba benza iimpazamo. Read More
Khangela imifanekiso yezilwanyana ezahlukileyo ezihlanu. Ukuba kunzima ukuyifumana imifanekiso, ningazizoba izilwanyana. Umfanekiso wesilwanyana ngasinye kufuneka ube sephepheni okanye kwikhadi elilodwa.
Phambi kokuba niqale umdlalo, ncokolani ngesilwanyana ngasinye esisemifanekisweni. Ncokolani ngendlela esikhangeleka ngayo, sitya ntoni, sihlala phi. Ingaba sindlongondlongo okanye silulamile? Xa unokusibamba ngesandla sakho, sivakala njani? Ingaba sidada emanzini, siyahamba okanye siyabhabha?
Ngoku ke dlalani umdlalo. Beka imifanekiso yezilwanyana ndawonye. Nikanani amathuba okukhetha umfanekiso oza kubonwa kuphela ngulowo ukhethayo. Umntu ongenamfanekiso ubuza imibuzo ezama ukuqashela ukuba sisiphi isilwanyana esisemfanekisweni. Umntwana wakho mhlawumbi angafuna ukuvele aqashele amagama ezilwanyana de achane. Mkhuthaze ukuba acinge ngezinto anokuzibuza. Ukuba uqashele kakuhle, mnike umfanekiso. Kufuneka umncede ungamyeki asokole.
Yenza umfanekiso ngepeyinti
Ukupeyinta yindlela eyonwabisayo yokwenza amabala ephepheni. Oku kuncedisa abantwana abancinci ukuba balungele ukubhala. Ngaphandle kokonwabisa, komeleza izihlunu zezandla zabantwana kwaye bayakhuthazeka batsho babeke iingcinga zabo ephepheni. Read More
Kufuneka ube nepeyinti, iphepha okanye ikhadi kunye neebhrashi zokupeyinta. Ukuba awunayo ipeyinti ekhaya, ninomntwana wakho ningazenzela ipeyinti. Sebenzisani iresiphi esininike yona. Ukuba awunazo iibhrashi zepeyinti, ungasebenzisa isiponji, ibhrashi endala yamazinyo okanye usiba lwenkuku, kuba mnandi kakhulu ke nokusebenzisa iminwe!
Lungisa indawo aza kusebenzela kuyo umntwana wakho. Kufuneka uzilungiselele ke, wazi ukuba kuza kungcola! Mcele umntwana ukuba enze ngepeyinti umfanekiso wento ayithandayo okanye indawo ayithandileyo ebalini enilifunde kunye.
Bakhuthaze bathethe ngemifanekiso yabo ubancome ngokuzama. Akukho ndlela ichanekileyo okanye ingachanekanga yokuzoba ngepeyinti. Ngalo msebenzi, uza kubancedisa ekukhuliseni isigama sabo, isakhono sokucinga nesokomeleza amalungu omzimba abaza kusisebenzisa xa bebhala.
Iresiphi yokwenza ipeyinti
Kufuneka: I-¼ yekomityi yetyuwa, I-1/2 yekomityi yomgubo wokuxova, I-1/2 yekomityi yamanzi, Isithako sokuguqula umbala wokutya
Indlela yokuyenza: Galela umgubo wokuxova kunye netyuwa esityeni, uxube. Galela amaqabaza ambalwa esithako sokuguqula umbala wokutya emanzini. Galela la manzi anombala kumxube womgubo netyuwa. Zamisa de kuphele izigaqa. Amanzi ungawagalela ngokwendlela ofuna ijiye ngayo ipeyinti yakho.
Abalinganiswa bebali ababunjwe ngentlama yokudlala
Ukudlala ngentlama yokudlala komeleza iminwe nezihlunu ezisetyenziswa xa kubhalwa. Isigama esityebileyo nokulandelelanisa izimvo kakuhle kuyabanceda abantwana babhale ze bafunde ngcono! Lo msebenzi ukhuthaza abantwana ukuba bakwazi ukukhumbula ibali, bakhulise isigama sabo ngelixa bezonwabisa ngokudlala ngentlama yokudlala! Read More
Xa usenza lo msebenzi kuza kufuneka intlama yokudlala. Sikunikile ke neresiphi elula yokuyenza khonukuze uzenzele eyakho intlama yokudlala. Qokelela ke nezinti, amatye, amagqabi, iintyatyambo, amaso, iziciko zeebhotile nazo naziphi izinto anokuzisebenzisa kunye nentlama yokudlala, umntwana wakho xa ebumba umlinganiswa.
Cela umntwana wakho ancokole ngabantu, izilwanyana okanye nangantoni ayicingayo ekwibali ebelivile okanye alifundileyo. Nguwuphi umlinganiswa amthande kakhulu? Ukhangeleka njani?
Mnike ithuba lokubumba umlinganiswa amthandaileyo, umntwana asebenzise intlama yokudlala. Bangasebenzisa ezinye zezinto oziqokeleleyo, bazifake kumlinganiswa wabo.
Bakugqiba, ncokolani ngomlinganiswa abambumbileyo – Ingaba unalo igama? Uhlala phi? Uthanda ukwenza ntoni? Unabo abahlobo? Yintoni ehlekisayo okanye enomdla eyayikhe yamehlela lo mlinganiswa? Ukuba unako ukuthetha, ebenokuthini lo mlinganiswa?
Mcele ke ngoku umntwana wakho ukuba azobe umfanekiso womlinganiswa wakhe ze abhale isivakalisi ngalo mzobo. Ungababhalela isivakalisi okanye ubancedise ubabhalele amagama athile okanye amalungu athile amagama.
Emva koku, okanye ngenye imini, ningabumba omnye umlinganiswa kunye nomntwana wakho. Ninobabini, ningenza ibali elitsha ngabalinganiswa ababini.
Maninzi amagama asetyenziswa qho, kwiincwadi zabantwana. Amanye ala magama kunzima ukuwabiza. Abantwana kufuneka bawafunde kwaye bawabhale la magama amaxesha amaninzi phambi kokuba bakwazi ukuwanakana nokuwapela ngokuzithemba. Lo mdlalo ke unika abantwana ithuba lokuziqhelanisa nesi sakhono. Read More
Ningawudlala endlini okanye phandle lo mdlalo. Khetha amagama ama-5 ukuya kwasi-7 kuluhlu lwamagama esikunike lona.
Ukuba uza kuwudlala phandle lo mdlalo kufuneka ufumane indawo ethe tyaba onokukwazi ukubhala kuyo ngetshokhwe, ngoluthi okanye ngelitye khonukuze ukwazi ukuzoba kuyo iibhloko ubhale namagama.
Ukuba lo mdlalo uza kuwudlalela ngaphakathi endlwini, bhala amagama owakhethileyo kwiziqwengana zekhadibhodi uze wenze ngawo indawo ekuza kuhanjwa kuyo. Cacisela umntwana wakho ukuba alumke xa ehamba, etsiba okanye exhuma ecaleni kwegama ngalinye, khonukuze bangatyibiliki kwikhadibhodi benzakale.
Mbonise umntwana wakho indlela yokudlala lo mdlalo. Tsibela kwibhloko nganye uze ubize igama njengokuba utsiba. Wakugqiba, myeke adlale. Xa engakwazi ukulibiza igama, mxelele! Sukumyeka esokola.
Phindani niwudlale kwakhona lo mdlalo, nisebenzise enye isethi yamagama.
Abantwana bayakuthanda ukushukumisa imizimba kwaye ke kulo mdlalo bonwatyiswa kukushukumisa umzimba nokwenza kunye nawe umthambo!
Ukuzonwabisa ngokuphuthaphutha engxoweni!
Isigama esityebileyo siza kumnceda umntwana wakho ukuba awazi amagama anzima adibana nawo ezincwadini kwaye siza kuphucula nesakhono sakhe sokubhala. Lo msebenzi uncedisana nokukhulisa isigama somntwana kuba umnika ithuba lokuba aphulaphule ze asebenzise amagama angafane awasebenzise. Read More
Qokelela izinto ezivakala ngeendlela ezahlukileyo xa zisesandleni. Into nganye kufuneka yahluke xa umntwana wakho eyibambe ngesandla sakhe. Nazi ke iingcebiso malunga nezinto onokuzikhetha: into yokudlala efukufuku, icephe, into yokukhuhla iimbiza, ilitye, ilaphu, into ebandayo ephuma efrijini, isingxobo seplastikhi nebhrashi yeenwele.
Faka izinto engxoweni okanye ebhokisini. Cela umntwana afake isandla, engakhange ajonge ebhokisini okanye engxoweni, aphuthaphuthe ze abambe ngesandla sakhe into ibe nye, achaze ukuba ivakala njani esandleni sakhe. Umntwana wakho usenokuziqwebela igama elichaza indlela evakala ngayo esandleni sakhe into ayibambileyo, kwaye ke ilungile loo nto. Wamkele onke amagama akhe abonisa umfanekiso ntelekelelo!
Bancedise abantwana ubanike amagama afanelekileyo xa bexingile. Usenokuthi, “Ingaba iqinile? Ithambile? Iyahlaba? Iyabanda? Igudile? Incangathi?” Emva koko, bacele ukuba bayikhuphe ukuze niyibone into ebebeyichaza! Mncedise ke umntwana ayibize ngegama layo uze umbuze, “Ungayisebenzisa njani? Yiyiphi enye into onokuyenza ngayo?”
Ncokola naye umchazele ukuba ezinye izinto zingavakala ngeendlela ezininzi – umzekelo, ibhrashi yeenwele ingahlaba, iphinde ibe tsolo futhi igude; into yokukhuhla imbiza yona ikhe ibe nesiponji esinecala elithambileyo kunye necala elirhabaxa.
Kowu, niza kuyonwabela le ncoko kwaye iyindlela emnandi neyonwabisayo yokukhulisa isigama somntwana wakho!
Abantwana bafunda ngokukhawuleza kwaye benza iimpazamo ezimbalwa xa bezithembile. Qwalasela izinto ezifundwa ngumntwana wakho xa esenza into ayonwabelayo efana nokuphulaphula ibali, ukuzoba umfanekiso, ukudibanisa iphazili okanye ukupheka kunye nawe. Read More
Ngoku, basenokuzoba iinkcukacha ezininzi emfanekisweni wabo kunakuqala. Mhlawumbi ngoku baphulaphula amabali amade okanye babuza imibuzo ebonisa ukuba bayacinga ngebali. Xa uqaphele into ethile abayifundileyo baxelele ukuba uyayibona. Yithi kubo, “Ndiyayithanda into yokuba usebenzisa imibala emininzi ngoku!” okanye “Ubuza imibuzo elungileyo.” Xa ubhiyozela impumelelelo yakho kunye nenkqubela-phambili yomntwana wakho, singakuvuyela ukuthunyelelwa iifoto zomntwana wakho esenza umsebenzi awuthandayo. Sixelele izinto abanako ukuzenza ngoku ebebengakwazi ukuzenza ngaphambili!
Sebenzisa le resiphi sikunike yona wenze iipancakes eziginyisa iingwiqi – Zingalungela itheko lomhla wokuzalwa okanye ungazenzela nje ukukhe uzivise kamnandi ngeli xesha lokuvaleleka ezindlini! Read More
Mcele umntwana wakho ukuba akuncedise niqokelele zonke izinto eniza kuzisebenzisa, makaxube kunye nawe izithako ze alandele onke amanyathelo okupheka. Ungalibali ke ukusoloko ubajongile abantwana abancinci xa bekwigumbi lokuphekela.
Emva kokuba nigqibile ukwenza iipancakes nazitya, nika umntwana wakho amaphepha amancinci okanye ikhadi. Mncedise ukuba abize amanyathelo okwenza iipancakes ze azobe futhi abhale inyathelo ngalinye kwiphetshana elilodwa. Wancamathisele ke la maphetshana ngokokulandelelana kwamanyathelo, efrijini okanye ekhabhathini kungenjalo kwincwadi yeeresiphi khonukuze ukwazi ukuyisebenzisa kwakhona le resiphi.
Ukupheka kunye ngokweresiphi kumnandi kwaye kuyindlela elungileyo yokufunda ulwimi. Xa nixuba izithako, ncokolani ngendlela ezisebenza ngayo – umzekelo: indlela igwele lokuxova eliyonyusa ngayo intlama futhi nendlela amaqanda azidibanisa ngayo izithako.
Abantwana bafunda amagama asetyenziswa kwimilinganiselo afana nala: ikomityi, icephe, intwana kwaye batsho bafumanise ukuba ingakanani ikota yekomityi. Basenokubala ukuba zingaphi iipancakes abazenzileyo ze baphinde babale ukuba bezinokuba ngaphi xa bebephindaphinde imilinganiselo yezithako kabini. Enjani yona ukuba mnandi nokuba lula indlela yokukhulisa ulwazi lwezibalo!
Bafunda ukulandela indlela izinto ezilandelelana ngayo nokuyiphindaphinda xa befuna ukuphinda bazenzele into emnandi kwakhona. Ukubhalwa kwayo phantsi iresiphi kuluncedo kakhulu. Ukucinga nje ngezinto abaza kuzifaka kwiipancakes zabo, kukhulisa isakhono sabo sokuyila kuba kaloku kufuneka bekhangele izinto ezikhoyo apho ekhaya. Ngale ndlela ke bathi basombulule ingxaki ngokuthi bajonge ukuba ziziphi izinto ezinokudityaniswa kunye ze zibe mnandi xa zifakwe kwiipancakes. Ubusazi ukuba umntwana wakho angafunda lukhulu kakhulu xa epheka nawe?
Ikomityi yomgubo wokuxova, Iitispuni ezimbini ze – baking powder, Intwana yetyuwa, Ikota yekomiti yeswekile, Iqanda elinye, Ikomityi ethe gabhu phezulu yobisi, Itispuni elinye le – vanilla essence
Galela umgubo wokuxova, i – baking powder, ityuwa kunye neswekile esityeni uzixube.
Qhekeza iqanda uligalele ze ugalele, ivanilla essense kunye nobisi esityeni uzamise
Galela amacephe azeleyo entlama kwipani ene-oyile encinci
Yigcade intlama yakho macala
Yitye uyifake izinto ozithandayo
Ezi zithako ziza kukwenza iipancakes ezi-6 ukuya kwezi-8.
Cela umntwana wakho akuncedise uhlele ivasi ecocekileyo, xa uza kuyisonga uyibeke ngeendawo zayo. Ncokola nomtwana wakho umkhuthaze acinge ukuba ziziphi iimpahla ezinokubekwa kunye, ngoba kutheni. Unokuthi kuye, “Masizibeke kunye zonke iikawusi. Ngoku ke masikhangele iipere ezihamba kunye zeekawusi ukuze ndizisonge.” Read More
“Ingaba zisakulingana ezi kawusi? Usafuna ukuzigcina okanye zincinci kakhulu ngoku? Ngoku ke masibeke ndawonye zonke iikawusi zakho.” “Masikhe sijonge iikawusi zikatata okanye ezikamama okanye ezikasisi. Ziziphi ezona kawusi zinde? Ziziphi ezona zimfutshane/ ezingqindilili okanye ezilwasulwasu?
Abantwana bangabeka zonke iizikipha okanye iikawusi okanye iitawuli kunye, kanti ke basenokubeka iimpahla zelungu ngalinye losapho kunye. Basenokuzibeka bazahlule ngokwemibala iimpahla kungenjalo babeke ezemozulu eshushu kunye, zize ezemozulu ebandayo zibekwe zodwa. Impahla yangaphantsi isenokohlulwa kuleyo yokunxiba.
Ukuhlela nokutshatisa sisakhono esibaluleke kakhulu ebantwaneni. Kubanceda ukuba bakwazi ukubona umahluko phakathi kwezinto futhi babone neendlela izinto ezifana ngayo. Oku kuya kubanceda bakwazi ukubona ukufana nokwahluka koonobumba nezandi xa befunda ukubhala nokufunda. Baza kuncedakala kwakhona ekufundeni imiba yeziBalo efana nale: “iyafana”, “yahlukile”, “ininzi kunale”, “incinci kunale”, “ziyalingana”.
Nazi zinto ekufuneka unazo ukuze nidlale lo mdlalo: Izinto ezincinci zibe,-4 okanye zibe-5, oza kuzifumana apho ekhaya, itreyi okanye itafile, ilaphu oza kogquma ngalo izinto. Inani lezinto liza kuxhomekeka kubudala bomntwana wakho. Read More
Xa abantwana bakho besafunda izandi zoonobumba, amagama ezinto oza kuzikhetha, zama ukuba agxile kwisandi abasasifundayo. Beka izinto etreyini okanye etafileni. Nikunye nomntwana wakho, zibizeni ngamagama azo izinto ezisetreyini okanye etafileni. Nakugqiba, yegquma izinto ngelaphu. Cela umntwana wakho ukuba azobe ze achaze igama lento nganye ayibonileyo eyegqunywe ngelaphu.
Lisuse ilaphu uze ujonge ukuba umntwana wakho uzikhumbule zonke na izinto. Mcele umntwana ukuba acimele ngelixa wena ususa into ibe nye. Myalele ukuba avule amehlo achaze ukuba yiyiphi into oyisusileyo. Ungaphindaphinda ke umana ukususa ezinye izinto. Into ebalulekileyo kukuba umntwana awonwabele lo mdlalo.
Nikanani amathuba ke nomntwana wakho. Mayikhe ibe nguye osusa izinto, ngoba kaloku angavuya kakhulu xa ebona wena ‘ubhuda’ ungayazi ukuba yiyiphi into engekhoyo. Lo mdlalo ufanele ukuba wonwabise futhi ube mnandi. Umntwana wakho uza kuzithemba azive ephumelela. Mncome ngalo lonke ixesha ezama!
Lo mdlalo uncedisana nokukhulisa isakhono somntwana sokuqaphela, ukuqwalasela kunye nesakhono sakhe sokukhumbula. La ngamanyathelo abalulekileyo okuncedisa umntwana wakho ekufundeni nasekubhaleni.
Umdlalo wokukhangela izinto ezinezandi ezithile
Bhala isandi ngasinye kwezi: (t, s, p, b, m, r) kwiphetshana elincinci, nto leyo ethetha ukuba iphetshana ngalinye liya kuba nesandi esinye. Wasonge ke la maphetshana anezandi uwafake kwisityana esincinci okanye emnqwazini. Cela umntwana wakho ukuba akhuphe isandi sibe sinye aze akhangele izinto ezineso sandi apho endlini. Umzekelo, isandi u-t sifumaneka kwigama “isitulo”. Read More
Myalele ngolu hlobo umntwana wakho xa nisenza lo msebenzi: “Ndiza kukunika imizuzu embalwa ukhangele apha endlini zonke izinto onako ukuziphatha ngesandla ezinesandi u “t”. Thatha into ibe nye ngexesha uze uyibeke etafileni okanye emethini. Uze ungazithathi zonke ngexesha elinye. Xa usiva ndisenza isandi ke, uze wazi ukuba kufuneka upheze! Isandi ke ndiza kusenza ngempempe okanye ndibethe imbiza ngecephe.”
Emva koku ke, mcele umntwana ukuba akunike igama lento nganye aze nayo. Ukuba wenze impazamo, umncome ungamtyhafisi futhi umlungise kakuhle. Unokuthi kuye, “Ewe licephe eli kwaye linesandi u “c” kodwa ke alinaso isandi u “t”. Uyeva ke?” Qhubani ke nidlale ngesinye isandi eniza kusikhupha esityeni okanye emnqwazini.
Lo msebenzi ulungele abantwana abasafunda oonobumba nezandi, ukhulisa isigama kwaye uphuhlisa isakhono sokusombulula iingxaki nesokuphulaphula. Khawucinge kaloku, baphulaphula isandi esikwinto ekufuneka beyikhangele ze bathathe isigqibo sokuba bayithathe okanye bangayithathi into leyo, kufuneka banike igama lento enesi sandi. Ngaphandle koku ke, abantwana abancinci bayakuthanda ukujikeleza kwaye bayakonwabela ngakumbi ukukhangela okanye ukuzingela izinto.
Yenzani amakhadi anomfanekiso
Izinto ekufuneka unazo, nazi: Iimagazini ezindala okanye amaphetshana anemifanekiso kunye nolwazi (leaflets) Irula, Iglu, Ipensile, Isikere nekhadibhodi. Read More
Sebenzisani ikhadi elinomfanekiso libe linye ngexesha. Nikunye nomntwana wakho ncokolani ngomfanekiso osekhadini nize nibize amagama ezinto enizibonayo emfanekisweni. Cela umntwana wakho ukuba akhombe into ethile emfanekisweni okanye alinganise into eyenzeka emfanekisweni. Mhlawumbi ingangumfanekiso womntu obalekayo, otsibayo okanye umntu odanisayo.
Le yindlela emnandi neyonwabisayo yokukhulisa isigama somntwana wakho. Umzekelo: “Imagi ikhangeleka ngolu hlobo kwaye inomqheba owenza ukuba sikwazi ukuyiphatha. Ivalekile ngaphantsi ze yavuleka ngaphezulu khonukuze ukwazi ukusela ngayo.”
Kubalulekile kakhulu ukumncedisa umntwana ekuphuhliseni isakhono sakhe sokuphulaphula ngenyameko. Xa isakhono sokuphulaphula silungile umntwana unako ukuqonda into ethethwayo, unako ukulandela imiyalelo futhi uyakwazi ukwenza imisebenzi ayigqibe. Read More
Xa abantwana abancinci befunda ukubhala nokufunda, kufuneka bakwazi ukuziphulaphula izandi ezahlukileyo zamagama.
Enye indlela yokuncedisana nabantwana ekuphulaphuleni ngenyameko kukunciphisa ingxolo kwindawo abahleli kuyo. Zama ukucima umabonakude okanye unomathotholo khonukuze umntwana aphulaphule izandi kwindawo ahleli kuyo, kuthe cwaka.
Cela abantwana bakho ukuba bavale amehlo. Babuze ukuba ziziphi izandi abazivayo ngaphakathi endlwini. Emva koko, phuma nabo phandle ubabuze ukuba ingaba ziziphi izandi abazivayo phandle. Ungaqhubekeka ubabuze ukuba kwezi zandi bazivileyo, ziziphi izandi ebezingxola yaze yaziziphi izandi ebezisitsholo phantsi.
Ukwenza isixhobo somculo esinesandi sehlombe esihlokomayo
Ubusazi? Ukucula nomculo zizinto ezibalulekileyo kuyo nayiphi na inkcubeko kwaye yindlela enamandla yokufunda ulwimi, ngelixa isonwabisa ikwaphuhlisa nobuchule bokuyila.Indlela yokwenza isixhobo somculo esinesandi sehlombe esihlokomayo Read More
Hlambisisa ibhotile kakuhle icoceke.
Yikha amatye amancinci okanye amaso azale isandla ze uwagalele ebhotileni. Xa zixutyiwe ezi zinto ziba nomtsalane xa uzijongile.
Vala ibhotile ngesiciko siqine okanye ungasifaka iglu isiciko ukuze siqine singaphuncuki
Zisebenzise ezi zixhobo zomculo zihlokomayo xa nicula iingoma naxa nisenza izicengcelezo. Bakhuthaze abantwana abathe dlundlu ukuba bazisebenzise xa becula iingoma zabo abazithandayo.
Bhalani uluhlu lwezinto eziza kuthengwa ezivenkileni
Nika umntwana wakho ithuba lokuba akuncedise xa ubhala uluhlu lwezinto eziza kuthengwa. Njengokuba uthetha ngezinto ekufuneka zithengelwe usapho evenkileni, cela umntwana wakho azame ukuzibhala. Lo msebenzi abazukuwobona njengomsebenzi wokubhala koko baza kuwubona ingumsebenzi wabantu abadala ze oku kubonwabise ngakumbi. Read More
Awuyazi indlela abaza kuvuya bazingce ngayo xa bekubona uthatha uluhlu abakuncedisileyo ukulubhala, usiya nalo evenkileni.
Abantwana abancinci bona bangafuna ukuzoba umfanekiso wento eza kuthengwa. Abantwana basenokubhala isandi sokuqala segama ze baziqambele indlela yokulipela njengokuba besiva izandi zamagama. Le yindlela yokufunda ukuba ngumbhali ngoko ke bancome ngokuzama kwabo. Sebenzisa amagama akhuthazayo nancomayo xa ubabukele bebhala. Xa abantwana bebona indlela ukubhala ekuluncedo ngayo, baba nomdla ngakumbi ze bafune ukuzama.
Ncokola ngemizobo yomntwana wakho
Abantwana bayakonwabela ukuzoba. Xa bezoba rhoqo, kokukhona baye besiba nomdla kwizinto ezibangqongileyo. Bangazoba indawo abayithandileyo ebalini okanye into ababekhe bayibona kungenjalo bazobe abalinganiswa bebali abaziqwebele lona. Read More
Ncokola ke ngoku kunye nabo ngemifanekiso abayizobileyo ze ubancome. Bakhuthaze bazame ukubhala nokuba babhala amarhoqololo okanye oonobumba abazikhethele bona.
Ngale ndlela uyakuba uyabanceda ekuphuhliseni isigama sabo, isakhono sabo sokucinga kunye nezakhono zabo zomzimba ezifuneka xa bebhala.
Dlalani ngokubala nokumeta
Ubusazi? Ngokibala ntsuku zonke abantwana bakhawuleza ukufunda indlela yokulandelelanisa amanani nto leyo ebanceda kwizibalo esikolweni. Read More
Mamela indlela abala ngayo umntwana wakho kodwa ungamgxeki xa enze impazamo njengokuba esafunda.
Bala yonke imihla. Bala abantu kusapho Iwakho; bala iitapile xa upheko isidlo sangokuhlwa; bala iimto ezigqithayo xa uhamba; bala abantu abaseteksini ungalibali ukubala iminwe yeszanla neenzwane!
Xa sikhuthaza abantwana ukuba baqaphele imiqondiso, iilogo kunye neeleyibheli, baza kuba nomdla ngakumbi kwizinto ezishicilelweyo ezikwiindawo abahamba nabahlala kuzo. Baza kuyijonga imifanekiso kunye neelogo baze bazame ukwazi ukuba zithetha ukuthini. Baza kuqalisa babone ukuba okushicilelweyo kuneenjongo futhi kusixelela izinto eziluncedo. Read More
Amaxesha amaninzi, umntwana uqalisa ukufunda ngokuqaphela iilogo kunye nemiqondiso yendlela. Ukuqaphela ukuba imiqondiso kunye neelogo kuthetha izinto ezithile, linyathelo lokuqala lokufunda. Kumnandi ukufunda iilogo kuba zinemibala kwaye amagama asetyenzisiweyo awalingani nto leyo enceda abantwana bawakhumbule kakuhle loo magama. Iilogo zenzelwe ukuba zicace gca ziqapheleke. Xa abantwana beboniswa le miqondiso baza kuqalisa ukuyibona kuyo yonke indawo baze ngolo hlobo babe bayafunda kuyo yonke indawo!
Nanku ke umsebenzi: Laqazani apho endlini nikhangele amagama ashicilelweyo onako ukuwabonisa umntwana wakho kwiipakethe zezinto. Sebenzisa amaphepha abonisa igrosari ethengiswayo okanye amaphepha abhengeza izinto ezithengiswayo afumaneka kumaphephandaba. Mkhuthaze umntwana wakho ukuba aqaphele ilogo kunye nemifanekiso ze aqashele ukuba amagama athini wona. La ngamanyathelo abalulekileyo akhokelela ekubeni abantwana babe ngabantu abakwaziyo ukufunda.
Umsebenzi wanamhlanje: Ncokolani ngokushicilelweyo
Ncokolani ngento eyayenzeke ekhaya
Khangela ifoto ekukhumbuza ngesiganeko esibalulekileyo nesikhethekileyo esasenzeke kwikhaya lakho. Buza umntwana imibuzo ngesi siganeko usebenzisa amagama afana nala, xa uncokola naye: Kwakuphi? Kwenzeka ntoni? Kwakutheni? Kwakunini? Yenzeka njani? Yayingoobani ababekhona? Ukuba awuyifumani ifoto, ungayiqala incoko ngolu hlobo: “Usakhumbula ngexesha ekwaku…….” Read More
Ungawengeza lo msebenzi ngokuthi usonge iphepha elingu-A4 libe yincwadi encinci ze ubhale kuyo eli bali ulifumana ebantwaneni. Abantwana mabazobe imifanekiso ehambelana nesivakalisi ngesinye esikwiphepha ngalinye lencwadi encinci. Abantwana abathe dlundlu bona bangazibhalela ibali. Akusemnandi ngako ukwenza ithala elincinci lencwadi ekhaya futhi elinamabali osapho!
Lo msebenzi unika abantwana ithuba lokulandelelanisa iingcinga zabo nokufunda indlela yokusebenzisa ulwimi xa bethetha ngezinto ezenzeka kudala. Xa ungena nzulu encokweni ngokubuza le mibuzo: Phi? Nini? Ngoba? Njani, Ngubani?, uyabancedisa abantwana ekuphuhliseni isakhono sabo sokucinga.
Umsebenzi wanamhlanje: Ncokolani ngento eyayenzeke ekhaya
Dlalani ngeebhloko kunye neephazili
Kutheni kubalulekile nje ukudlala ngeebhloko neephazili? Xa abantwana bedlala ngeebhloko okanye iibhokisi ezahlukileyo ngobukhulu bafunda izakhono ezitsha ezibalulekileyo neziluncedo. Bafunda ukulungelelanisa into phezu kwenye bafumanise ukuba kutheni izinto zilungelelene nje – okanye kutheni zisiwa! Bafunda ukusombulula iingxaki, babe nobuchule bokuyila futhi bakwazi nokusebenza kunye. Read More
Xa abantwana bedlala kwaye besakha ngeebhloko okanye bedlala iiphazili, thatha imizuzu embalwa ubakhuthaze. Bachazele amagama amatsha afana nala -ukulungelelanisa, ngqukuva, isikwere, incinane kunale, indana kunale, ziyafana, ngaphezulu, ngaphantsi, phezulu, ezantsi. La magama ke ngamagama abalulekileyo xa kufundwa iZibalo esikolweni!
Ukudlalisa – kutheni kubalulekile? Abantwana bayakonwabela ukubakunye noontanga babo, kuphuhla iimbono ezintsha, nemifanekiso ngqondweni yamabali.
Kuyanceda ukuzama ukudlalisa ubengomnye umntu okanye wazi ilizwe ngokuthatha inxaxheba.
Qokelela izinto ezahlukileyo apha endlini abanokuzisebenzisa ekudlaliseni abantwana. Umzekelo : iminqwazi, iibhegi, iincwadi, iimpahla, iingubo, izitulo, amacephe eplastiki nezitya, Yonwaba.
Balisa amabali amnandi osapho kwakunye namabali emihla ngemihla
Ubusazi na? Ukumamela amabali malunga nezinto usapho oludlule kuzo, kwenza abantwana bazive beyinxalenye yamalungu osapho lwabo. Bafunda ngolwimi olukhethekileyo olusetyenzisiweyo ngelixa kubaliswa ibali ngezinto zakudala. Ukumamela amabali kwenza kube lula ukubalisa amabali akho ngenye imini. Read More
Ngamanye amaxesha abantwana bayafuna ukubalisa amabali abo kodwa basuke
bafumane kunzima ukukhupha amagama abawadingayo ngokukhawuleza baze
bazive babenokudandatheka okanye babonakale benokuthandabuza ze baphindaphinde amagama. Eli ke lixesha lokuba nomonde kwaye ungahlekisi
Umsebenzi: Ukubaliselana amabali nokwenza iincwadi
– Khuthaza amalungu amadala osapho ukuba abalise amabali awo, ingakumbi lawo
abonisa indlela ayekrelekrele okanye engamagorha ngayo.
– Nikunye nomntwana wakho ningenza la mabali abe ziincwadana ezincinci futhi ibe
ngamabali athetha ngamalungu ahlukeneyo osapho.
Sebenzisa amagama akhuthazayo
Bonke abantwana bafunda ngcono xa befumana inkxaso futhi bekhuthazwa. Kufuneka ke ube nomonde ebantwaneni bakho xa bekubalisela ibali, xa bezoba umfanekiso, xa bezama ukubhala okanye bezama ukufunda. Read More
Kufuneka wazi kaloku ukuba ukufunda kuthatha ixesha elide. Sebenzisa amagama akhuthazayo nawakhayo khonukuze umntwana wakho azithembe futhi akhuthazeke asoloko efuna ukuzama lonke ixesha!
Imizekelo yamagama akhuthazayo yile:
 Uphantse wayichana…
 Uzamile kakhulu…
 Uza nayo kakuhle…
 Ndiyayithanda imbono yakho…
 Khawucinge kwakhona…
 Ndiyayithanda indlela ocinga ngayo…
 Ndiyavuya kakhulu xa ndibona ukuba uyazama…
Umsebenzi wanamhlanje: Sebenzisa amagama akhuthazayo
Bonke abantwana bafunda ngcono xa befumana inkxaso futhi bekhuthazwa. Kufuneka ke ube nomonde ebantwaneni bakho xa bekubalisela ibali, xa bezoba umfanekiso, xa bezama ukubhala okanye bezama ukufunda. Kufuneka wazi kaloku ukuba ukufunda kuthatha ixesha elide. Sebenzisa amagama akhuthazayo nawakhayo khonukuze umntwana wakho azithembe futhi akhuthazeke asoloko efuna ukuzama lonke ixesha!
Chaza okanye ucacise indlela ezisebenza ngayo izinto
Ukuncokola yonke imihla kuyinto entle kakhulu futhi kuyamangalisa, ingakumbi xa kufuneka kuchazwe indlela ezisebenza ngayo izinto. Umzekelo, ukuba umntwana wakho ukhomba impumlo ende kwindlovu esemfanekisweni, wena unokuthi, “Ewe, sithi ngumboko ke lo kwaye indlovu iwusebenzisa xa izihlamba futhi ithatha ngawo ukutya.” Read More
wakho udlala ngezinto zakhe zokudlala emanzini, ungancokola naye ngezinto ezikwaziyo ukudada phezu kwamanzi nezo zitshonayo xa zisemanzini. Xa mhlawumbi nisitya ze umntwana wakho achaze ukuba eyona mifuno ayithandayo yiminqathe unokuthi ke wena, “Ubusazi ukuba iminqathe ikhula phantsi komhlaba!”
Yonke imihla unokulifumana ithuba lokuthetha ngendlela ezisebenza ngayo izinto okanye ngezizathu ezibangela ukuba senze izinto. Ngale ndlela uyakuba ukhulisa isigama somntwana wakho futhi ukwamxhobisa ngolwazi olumalunga nelizwe aphila kulo.
Umsebenzi wanamhlanje: Chaza okanye ucacise indlela ezisebenza ngayo izinto
Zoba umfanekiso wetroli okanye owebhaskithi yokufaka iimpahla xa uyokuthenga evenkileni. Cela umntwana wakho ajonge amaphepha abhengeza izinto zeevenkile kunye neemagazini. Myalele ke ukuba asike imifanekiso yezinto anqwenela ukuzithenga ze azincamathisele ebhaskithini okanye kwitroli. Mxelele ukuba athenge ukutya akuthandayo, ukutya okusempilweni okanye izinto anokuzisebenzisa kwitheko lomhla wokuzalwa. Read More
Ubusazi? Lo msebenzi uphuhlisa isakhono sabantwana sokusika kwaye bafumana nethuba lokufunda ngelizwe abaphila kulo. Bancedise ke bafunde amagama amalungu osapho kunye nawezinto ezithengwayo. Umzekelo iiswiti zisenokubizwa ngokuba zilekese.
Umsebenzi wanamhlanje: Masiyokuthenga ezivenkileni
Ukwenza intlama yokudlala kunye ngumsebenzi omkhulu wasekhaya
Ukwenza kunye intlama yokudlala ngumsebenzi wasekhaya onika umdla kakhulu. Xa nisenza lo msebenzi, ufumana ithuba lokukhulisa ulwimi lwabantwana phofu bona bengaqondi ukuba bayafunda. Ncokola nabo ngezithako nezixhobo ozisebenzisayo. Read More
Kukho amagama okumeta afana nala: amacephe, ikomityi, kanti ke akho namagama ongeza kwisigama sabo angala: dibanisa, xuba, zamisa, pheka, yomile, imanzi. Xa unemibala eyahlukeneyo yokuguqula umbala wokutya, abantwana abathe dlundlu bangaqikelela umbala oza kuphuma xa bedibanise imibala ethile.
Bangasombulula neengxaki ezifana nezi: Ziziphi izithako endinokuzengeza xa umxube womile okanye umanzi kakhulu? Ukuxova nokubumba intlama yokudlala komeleza izandlana ezincinci zabantwana kunye nezihlunu zeminwe yabo. Oku ke kunceda ekubeni izandla zabo zingadinwa xa bebhala okanye bezoba. Intlama yokudlala ngumsebenzi olungileyo nozolileyo ingakumbi xa abantwana bengakwazi ukuzinza okanye benxunguphele. Sinayo ke neresiphi elula yentlama yokudlala. Nonwabe ke!! Siza kunithumelela imisebenzi emibini yentlama yokudlala.
Iikomityi ezimbini zomgubo wokuxova
Ikomityi enye yetyuwa
Iikomityi ezimbini zamanzi
Amacephe amabini e-oyile
Amacephe amane e-cream of tartar
Isithako sokuguqula umbala wokutya (food colouring)
Xuba zonke izithako ezingasentla ze upheke de intlama yakho iyeke ukuncamathela emacaleni kwimbiza yakho.
Yakuphola, yifake ke ngoku intlama yakho kwisikhongozeli esivalekayo nesingangeni moya.
Ukwenza umdlalo yokudlala kunye ngumsebenzi omkhulu wasekhaya
Yenza umlinganiswa ngentlama yokudlala
Cela umntwana wakho ukuba abumbe umlinganiswa ngentlama yokudlala. Xa bebumba umlinganiswa bangenza iingalo, imilenze kunye namehlo ngezinti, ngamatye, nangeziciko zeebhotile khonukuze umlinganiswa akhangeleke okomntu! Read More
Lo msebenzi unceda abantwana bakwazi ukusebenzisa izinto abanazo ekuyileni iingcamango ezisezingqondweni zabo. Enjani yona ukumangalisa indlela yokuphuhlisa isakhono sokusombulula ingxaki!
Mncedise umntwana wakho ayile ibali elihlekisayo nelonwabisayo ngomlinganiswa wakhe. Ngubani igama lakhe? Uhlala phi? Uthanda ukwenza ntoni? Cingani ngento ehlekisayo okanye enomdla eyayehlele lo mlinganiswa ngenye imini? Kwenzeka ntoni emva koko? Ibali liphele njani?
Myalele umntwana wakho ukuba azobe umfanekiso aze abhale ibali ebegqiba kulibalisa okanye usenokubabhalela ibali ngethuba belibalisa.
Khumbula, kubalulekile ukuba abantwana bazame ukubhala kwaye kukwabalulekile ke ukuba bazibhale ephepheni iingcinga zabo. Upelo oluchanekileyo xa bebhala alubalulekanga kwaye alunamsebenzi.
Jonga ke imifanekiso yabalinganiswa abahlekisayo abenziwe ngentlama yokudlala. Kungabaliswa amabali amangalisayo ngabo!
Sibhalela amalungu osapho iileta okanye siwazobele imifanekiso
Thatha ijagi okanye itoti engenanto uyisebenzise njengebhokisi yeposi. Ungamncedisa umntwana wakho ayihombise kakuhle ukuze ibe nomtsalane le bhokisi yeposi. Mkhuthaze umntwana wakho ukuba abhalele ilungu ngalinye losapho ileta okanye alizobele umfanekiso. Thathani iintsuku ezimbalwa nisenza lo msebenzi ze niqinisekise ukuba akukho lungu losapho lilibalekileyo! Ningawacela onke amalungu osapho nawo abhalelane iileta okanye azobelane imifanekiso. Read More
Ningalibali ke ukukhumbuza wonke umntu ukuba apose umfanekiso okanye ileta yakhe kwibhokisi yeposi. Xa nihleli nonke, fundani iileta zenu nize nibonisane imifanekiso yenu. Akusemnandi tana ukufumana umyalezo osuka kwilungu ngalinye losapho!
Naliphi na ithuba lokubhalela injongo yokwenyani libonisa umntwana wakho ukuba ukubhala kuyonwabisa kukwanentsingiselo futhi asiyonto uyenza kuphela esikolweni. Ncoma imizamo yomntwana wakho, ungagxili ekulungiseni iimpazamo zakhe. Kaloku kuba mnandi kubo xa beziva bephumelela. Xa bekonwabela ukubhala baza kufuna ukubhala qho kwaye baza kukhuthazeka bafune ukubhala okokoko.
Ncedisa abantwana baziqhelanise nonobumba
Xa abantwana beziqhelanisa nokubhala oonobumba ngeendlela ezimnandi nezonwabisayo, bengabhali kwiincwadi zabo zesikolo, kuzenzekela ngokukhawuleza ukubhala xa selifikile ixesha lokuphindela esikolweni.Read More
Banokwakha oonobumba ngentlama yokudlala, banokubhala ngeminwe yabo okanye ngezinti esantini (Mzali, usenokwenza itreyi encinci yesanti ze oku kwenzelwe endlini). Bangasebenzisa amanzi nebhrashi yokupeyinta babhale oonobumba kwiindawo eziqinileyo ezifana neendonga okanye imigangatho kungenjalo basenokubhala oonobumba ngetshokhwe kwezo ndawo. Sifake umfanekiso obonisa zonke iindlela ezimnandi nezonwabisayo ezinokusetyenziswa ngabantwana xa beziqhelanisa nokubhala oonobumba babo xa besekhaya.
I spy: Ndiyacupha ngeliso lam
Lo msebenzi uluncedo kakhulu ebantwaneni xa befunda izandi zonoobumba. Khumbula. Kkuze abantwana bafunde ukufunda nokubhala kufuneka bazi izandi ezenziwa ngoonobumba hayi amagama oonobumba! Qokelela izinto ezahlukeneyo apho ekhaya. Ingazizinto zabantwana zokudlala okanye izinto ozithatha kwigumbi lokuphekela okanye kwelokuhlambela. Qinisekisa ukuba akuyongozi ukuziphatha ke ezi zinto uze uzibeke etafileni. Read More
Hlalani kufutshane netafile enibeke kuyo izinto nilusapho. Nikhumbule ke ukuba esiXhoseni sithetha ngezandi ekugxilwa kuzo. Umntu ngamnye ke uza kufumana ithuba lokuthetha athi: Ndiyacupha ngemehlo lam elincinci kwaye ndibona into enegama eligxila kwisandi u ‘ssss’. Abanye ke mabaqashele ukuba yintoni ephambi kwabo egxila kwisandi usss. Isenokuba yi “sosi” i “sitya” okanye i “sonka” Umntu oqashele ngokuchanekileyo nguye oza kuqhuba nomdlalo wokucupha! Nisenokuwudlala umjikelo wokuqala walo mdlalo ngokusebenzisa izinto ezisemfanekisweni esininike wona nize ke emva koko niqokelele izinto eniza kudlala ngazo apho ekhaya.
Lo mdlalo ke ubanceda kakhulu abantwana ukuba bakhumbule ukuphulaphula izikhokelo. Ukufunda ukuphulaphula ngenyameko kuza kubanceda abantwana bakwazi ukuphulaphula ngokwenene yonke imihla, xa utitshala ethetha eklasini, xa ecacisa umsebenzi naxa enika imiyalelo.
Ukwenza iincwadana ezincinci zonoobumba
Sebenzisa iphepha elingu-A4 wenze ngalo incwadi encinci. Khetha isandi eza kugxila kuso incwadi encinci ze sibhalwe ngonobumba omncinci kwiqweqwe langaphambili lencwadi encinci. Khawujonge ke ngoku imiyalelo kwakunye nomzekelo okwimifanekiso esikunike yona. Read More
Ngoku ke cela umntwana wakho akunike amagama ezinto okanye awabantu anesandi incwadi encinci egxile kuso ukuze azobe imifanekiso yezo zinto kwiphepha ngalinye. Umzekelo ukuba isandi ekugxilwe kuso ngu “c” amagama anokuvela ngala: icici, icawe, uCoceka, uCebisa
Leyibhelisha ke ngoku umfanekiso ngamnye uze ucele umntwana wakho atreyise isandi egxile kuso incwadi encinci. Ungamkhuthaza umntwana wakho ukuba ambhale unobumba uze wena ugqibezele ngokubhala igama. Lo msebenzi ufundisa umntwana ukuba akwazi ukuqwalasela izandi ezisemagameni. Ikwamfundisa ukuba isandi ngasinye sakhiwe ngendlela ethile okanye sibhalwa ngendlela ethile. Lo msebenzi ulungele abantwana abakwiBanga R nabakwiBanga loku-1.
Umsebenzi: Yenza incwadi ngekhadibhodi
Uzodinga: Iziqwenga zekhadibhodi kunye nemifanekiso efanelekileyo yokwenzela iintsana iincwadi, imagazini, isikere, iglu kunye nemitya ukubopha incwadi.
Indlela yokwenza incwadi ngekhadibhodi: Read More
Khetha umfanekiso ocacileyo, olula wento enye kwiphepha ngalinye.
Khetha imifanekiso emikhulu enemibala ekhazimlayo.
Iincwadi zingaquka imifanekiso yezinto ezahlukileyo okanye ungakhetha umxholo, umz. ubuso, izilwanyana, iintyatyambo, iimoto, izinto usana lwakho oluzithandayo, iintsapho, ukutya.
Kutheni oku kubalulekile nje?
Ukwenza ngathi ufunda incwadi okanye ukufunda nomntu omdala yeyona ndlela ilungileyo yokuqalisa ukufunda ukuba iincwadi zinomdla kwaye ziyonwabisa. Abantwana abafundelwe iincwadi ngabona bakulungela ngcono ukuqala isikolo. Eli thuba lelinye lemizuzu ebalulekileyo nenamandla ekufundeni komntwana. Le yindlela ebalulekileyo yokuba ngumzali ukusukela ebuncinaneni bomntwana de alungele ukuqala kwisikolo samabanga aphantsi. Abantwana ababelana ngeencwadi nabantu abadala banesigama esiphuhlileyo kwaye bakulungela ngcono ukuqala isikolo.
Umfanekiso ubonisa amaqhekeza amane,iphazili eyenziwe ekhaya.Iphazili yenziwe ngomfanekiso oncanyathiselwe kwisiqwenga sebhodi yaze yasikwa.Xa usenza iiphazili nabantwana, bancedise baqaphele baze bachaze amaqhekeza ephazili. Read More
Umzekelo: ‘Eli qhekeza linecala elithe tyaba lize eli qhekeza libe nekona apha’; ‘Ungalifumana iqhekeza elimdaka ngombala lomboko wendlovu?’
Ukuthetha olu hlobo kukhuthaza abantwana ukuba bajonge ngononophelo uze ubanike amagama achaza ukuba bajonge ntoni.
Uza kudinga Iiphazile ezinamaqhekeza amabini kwakunye namane; izinto zokwenza iphazili ekhaya: umfanekiso, iglu, isikere, ikhadibhodi.